Bokin' i Rota - Wikipedia
Bokin' i Rota
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Rota)
Ny Bokin' i Rota dia boky ao amin’ ny Testamenta Taloha, ao amin’ ny Baiboly, sy ao amin’ ny Tanakh, boky masin' ny Jiosy. Mitantara ny fiainan’ ny fianakaviana iray tamin’ ny andron’ ny mpitsara ny boky, ka manasongadina ny fifikiran’ ny vehivavy môabita iray, atao hoe Rota, amin’ ny rafozambaviny na dia teo aza ny fijaliana nahazo azy ireo. Lasa isan’ ireo olona manan-danja indrindra eo amin’ ny tantaran’ ny Israelita i Rota, na dia avy amin’ ny firenena hafa aza, noho ny niterahany ny razamben’ i Davida mpanjaka.
I Rota sy i Naomy, nataon'i Philip Hermogenes Calderon
Avondrona ao amin’ ny atao hoe boky ara-tantara ny Bokin’ i Rota ao amin’ ny Baiboly kristiana fa isan’ ireo atao hoe Ketuvim ("soratra") kosa ao amin’ ny boky masina hebreo Tanakh. Atao hoe מגילת רות / Megilath Ruth ("horonam-bokin’ i Rota") io boky io ao amin’ ny Tanakh.
1.1 Ny mpanoratra sy ny fotoana nanoratana ny boky
2 Fizaràna ny boky
2.1 Ny tsy fialàn' i Rota tamin-drafozam-baviny
2.2 Ny nifankahitan' i Rota sy i Bôaza
2.3 Ny paika nataon' i Naômy ho an' i Rota
2.4 Ny fampakaran' i Bôaza an' i Rota ho vady
3 Anaran' ireo olona resahina betsaka sy hevi-dehibe
3.1 Anaran' ireo olona resahina betsaka ao amin' ny boky
3.2 Ny lohahevi-dehiben' ny boky
Ny mpanoratra sy ny fotoana nanoratana ny bokyHanova
Tsy mitonona izay nanoratra azy ny boky nefa ny lovantsofina jiosy dia manao azy ho nosoratan’ ny mpaminany sady mpitsara Samoela. Ny ankamaroan’ ny mpikaroka dia mihevitra fa teo anelanelan’ ny taonjato faha-6 sy faha-4, tamin' ny andro nanjakan' ny Persiana, no nanoratana ny Bokin’ i Rota.
Boza, Julius Schnorr von Carolsfeld
Fizaràna ny bokyHanova
Boky kely ny Bokin’ i Rota ka azo zaraina efatra araka ny isan’ ny toko ao aminy:
Ny tsy fialàn’ i Rota tamin-drafozam-baviny (Rot. 1)
Ny nifankahitan’ i Rota sy i Bôaza (Rot. 2)
Ny paika nataon’ i Naômy ho an’ i Rota (Rot. 3)
Ny fampakaran’ i Bôaza an’ i Rota ho vady (Rot. 4)
Ny tsy fialàn' i Rota tamin-drafozam-bavinyHanova
Nifindra monina tany Môaba ny lehilahy israelita iray atao hoe Elimeleka sy i Naômy vadiny mba handositra ny fijaliana tao amin’ ny taniny. Nanambady an’ i Rota ny zanakalahin’ izy ireo. Maty anefa i Elimeleka sy ireo zananilahy izay tsy namela zanaka. Nody tany amin’ ny taniny any Betlehema i Naômy nefa nanaraka azy koa i Rota na dia navelan-drafozany hiverina any amin’ ny ray aman-dereniny aza.
I Rota nitady fialofana teo amin'i Boaza
Ny nifankahitan' i Rota sy i BôazaHanova
Tao Betlehema, nifankahita tamin’ i Bôaza zana-drahalahin’ ny vadin’ i Naômy i Rota raha nitsimpona salohim-bary tao amin’ny sahan’i Bôaza. I Bôaza dia lehilahy nanan-karena na dia mosarena ny tany tamin’izany fotoana izany.
Ny paika nataon' i Naômy ho an' i RotaHanova
Mba hahatonga an’ i Naômy hanana taranaka dia nanao tetika i Naômy ny mba hisian’ ny havam-badiny hanambady an’ i Rota, ka naniraka azy handry an-tsokosoko teo an-tongotr’ i Bôaza mba hahatonga an' ity farany hanampy azy. Ny lehilahy heverina fa tokony hanambady an’ i Rota anefa tsy tapa-kevitra ny hanambady azy.
Ny fampakaran' i Bôaza an' i Rota ho vadyHanova
Nahita fitia teo imason’ i Bôaza i Rota ka tanteraka ny fanambadian’ izy roa. Niteraka an’ i Ôbeda rain' i Jese izy ireo, dia ilay razamben’ i Davida mpajaka.
Anaran' ireo olona resahina betsaka sy hevi-dehibeHanova
Anaran' ireo olona resahina betsaka ao amin' ny bokyHanova
Ny anarana hoe Rota dia soratana hoe רות sady tononina hoe Ruth amin’ ny teny hebreo. I Naômy dia soratana hoe נָעֳמִי sy tononina hoe Naˀami na Noˀomi amin’ ny teny hebreo. Ny hoe Bôaza dia soratana hoe בֹּ֫עַז sady tononina hoe Boˀaz amin’ ny teny hebreo, soratana hoe Βοόζ (/boόz/) kosa amin’ ny teny grika. Ny anarana hoe Ôbeda dia soratana hoe עוֹבֵד sady tononina Obêd na Ovêd amin’ ny teny hebreo.
Ny lohahevi-dehiben' ny bokyHanova
Asehon' ny Bokin’ i Rota fa tsy manavakavaka ny Andriamanitr' i Israely fa na olona avy amin’ ny firenena hafa aza dia raisiny ho isan’ ny olony sady mahazo anjara tsara aminy.
Boky ara-tantara prôtôkanonika: Bokin' i Jôsoa (na Jôsoe) - Bokin' ny Mpitsara - Bokin' i Rota - Boky voalohan' i Samoela - Boky faharoan' i Samoela - Boky voalohan' ny Mpanjaka - Boky faharoan' ny Mpanjaka - Boky voalohan' ny Tantara - Boky faharoan' ny Tantara - Bokin' i Ezra (na Esdrasa) - Bokin' i Nehemia
Boky ara-tantara deoterôkanônika: Bokin' i Tôbia - Bokin' i Jodita - Boky voalohan' ny Makabeo - Boky faharoan' ny Makabeo
"Rota sy Naomi ary Boaza"
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Rota&oldid=1041864"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 03:23
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 03:23 ity pejy ity.